ရုပ်မြင်သံကြားမှ TRF - အကျိုးဆုဖောင်ဒေးရှင်း - အချစ်၊ လိင်နှင့်အင်တာနက်
ပင်မစာမျက်နှာ ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာ TRF
၂၀၁၆ နှစ်လယ်ပိုင်းမှစပြီး The Reward Foundation ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mary Sharpe သည်ရုပ်မြင်သံကြားတွင်ပြသခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာတချို့။
GB သတင်း 2022
ကလေးသူငယ်များနှင့် လူငယ်များသည် ဆိုးရွားစွာ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ စိတ်ကျန်းမာရေး ညစ်ညမ်းများကို အလွယ်တကူဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းကြောင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြဿနာများ။ အန္တရာယ်ကင်းသော အင်တာနက်နေ့၊ အင်္ဂါ ၈th ဖေဖော်ဝါရီ 2022၊ ယူကေအစိုးရ ထုတ်ပြန်ကြေညာ အွန်လိုင်းဘေးကင်းရေးဥပဒေမူကြမ်းတွင် စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပုံဆိုက်များအတွက် အသက်အတည်ပြုခြင်းဥပဒေပါ၀င်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည် အလားအလာရှိသောအသုံးပြုသူများသည် 18 နှစ်နှင့်အထက်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်ယန္တရားတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CEO ဖြစ်သူ Mary Sharpe မှ ၎င်းအကြောင်းကို ကြည့်ပါ။ GB သတင်းတီဗီ.
BBC Scotland 2021 ရှိ The Nine
BBC III မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မုဒိမ်းမှုယဉ်ကျေးမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။“မော်ဒယ်လည်းဖြစ် ဧည့်ခံတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်း ပါဝင်သူ Zara McDermott သည် ယနေ့ခေတ်လူငယ်များအပေါ် ညစ်ညမ်းယဉ်ကျေးမှုကို မည်မျှအထိ ထိခိုက်စေကြောင်း မကြာသေးမီက ပုံဥပမာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
The Nine သည် မုဒိမ်းမှုနှင့် ညစ်ညမ်းယဉ်ကျေးမှုကြား ဆက်နွှယ်မှုများကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာကြည့်ရှုရန် အစီအစဉ်သို့ Mary Sharpe အား ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ Zara McDermott နှင့်အင်တာဗျူးပြီးနောက်၊ Mary သည် ဤစိန်ခေါ်မှုခေါင်းစဉ်ကိုရှာဖွေရန် Rebecca Curran နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်တွင် ရနိုင်ပါသည်။ မုဒိမ်းမှုနှင့် Porn.
BBC Scotland 2019 ရှိ The Nine
ဘီဘီစီစကော့တလန်ရုပ်မြင်သံကြားမှ Mary Sharpe ကို The Nine သို့ဖိတ်ကြားသောအခါ Reward ဖောင်ဒေးရှင်းက၎င်း၏လုပ်ငန်းအကြောင်းဆွေးနွေးခွင့်ရသည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့5အပေါ် itemth ဒီဇင်ဘာ 2019 သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများပြားလာခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောဆက်စပ်မှုအကြောင်းဖြစ်သည်။ Age Verification ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြraisedနာကိုလည်းပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပြီး Mary သည်ဘီဘီစီနှင့်မီဒီယာများတွင်သတင်းဖြန့်ဝေနေသောသတင်းမှားများကိုပြင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးအက်ဥပဒေအပိုင်း3တွင်ပါ ၀ င်သည့်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတည်ပြုချက်ဥပဒေကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန် 2017 သည်ယခုနှစ်တွင်ဖြစ်မည်ဖြစ်သော်လည်းရွှေ့ဆိုင်းခြင်းမပြုဘဲရွှေ့ဆိုင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ယူကေအစိုးရ ၀ န်ကြီးဌာနက ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို 18 ကျော်မှလူများသာကန့်သတ်ထားရန်အတွက် Online Harm Bill နှင့်ပေါင်းစပ်မည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။
ဒီအပိုင်းကို The Nine ရဲ့သတင်းစာဆရာ Fiona Stalker ကစပြီးမေးခွန်းထုတ်ခဲ့တယ် လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းမလိုလားအပ်သောအကြမ်းဖက်မှုများကို“ ပုံမှန်” ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းလား။? ရာဇ ၀ တ်မှုများစွာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တွင် 'ကြမ်းတမ်းသောလိင်မှုကိစ္စမှားယွင်းခြင်း' ကိုခုခံကာကွယ်ကြောင်းကြားသိခဲ့ရသည်။ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောသုတေသနပြုချက်အရအမျိုးသမီးများတိုးပွားလာမှုသည်မလိုလားအပ်သောအကြမ်းဖက်မှုများကိုကြုံတွေ့နေရသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုအပြစ်တင်ဖို့အရမ်းရိုးရှင်းသလား
စတူဒီယိုအိမ်ရှင် ရေဗက္ကာ Curran နှင့် Martin Geissler ထို့နောက်ရှုပ်ထွေးသောပြexploreနာကိုလေ့လာရန် The Reward Foundation ၏ဥက္ကChair္ဌနှင့်ဂျာနယ်လစ် Jenny Constable ဖြစ်သော Mary Sharpe နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။ ဗွီဒီယိုကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်။
စကော့တလန်ဂယ်လ်လူမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရည်စူးသည့်ပထမ ဦး ဆုံးအစီအစဉ်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းသည် 21 မတ်လ 2019 တွင်ပြသသည့် An Sgrudaire (The Investigator) စီးရီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ruairidh Alastair လူငယ်များ၏ဘဝကိုထိခိုက်ကြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုမေးခွန်းများကိုအတူနောက်ကျောဖြစ်ပါတယ်, မိမိမိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့သူ့တစ်သိန်းသုံးပြီး, ကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူစကားပြောကျွန်တော်တို့ရဲ့ panellists နားထောင်ခြင်းနှင့်သုတေသနပြုခြင်းဖြင့်အဖြေကိုရှာကြံနေပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာသူကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေစွဲလမ်းမှုနှင့်သူဘာအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာအင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတွေနဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေပေါ်မှာအသုံးပြုရတာလွယ်ကူသွားတယ်။ ပြသထားသောထုတ်ယူမှုမှာ Ruairidh ၏ The Reward Foundation မှ Mary Sharpe နှင့်ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။
မာရိကရှပ်အပေါ်ရုပ်မြင်သံကြားမှပြန်လာသော Nolan တိုက်ရိုက် မတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင် BBC မြောက်အိုင်ယာလန်၌ဘီဘီစီမြောက်ပိုင်းတွင်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအိမ်ရှေ့စတီဖင်နိုလ်လန်နှင့်အတူကလေးသူငယ်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုအငြင်းပွားဖွယ်လှုပ်ရှားသူတစ် ဦး နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည့်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲသူများနှင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်၊ BBC မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်တွင် Mary Sharpe တွင် Nolan Live တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ သူမသည်အသက် ၁၀ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်များအားအိမ်ရှင် Stephen Nolan နှင့်လန်ဒန်သတင်းစာ Carol Malone တို့နှင့်အတူဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုသည်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းစီဖြစ်ပြီး ၆ မိနစ် ၄၀ စက္ကန့်စီဖြစ်သည်။